विभागबाट तयार भएर आएका स्मार्ट लाइसेन्स धान खेतमा ! « Nepal Bahas
विभागबाट तयार भएर आएका स्मार्ट लाइसेन्स धान खेतमा !
प्रकाशित मिति : १३ कार्तिक २०७७, बिहीबार १२:४८
१३ कार्तिक, जनकपुरधाम । जनकपुरधाममा धान खेतमा फालिएको अवस्थामा तीन सय थान जति स्मार्ट लाइसेन्स भेटिएको छ । यातायात ब्यवस्था विभागबाट तयार भएर आएका लाइसेन्स जनकपुर उपमहानगरपालिका–१४ स्थित यातायात कार्यालयदेखि झण्डै २ सय मिटर पश्चिमतर्फ रहेको खेतमा धान काट्न गएका महिलाहरूले फेला पारेका हुन् ।
धान खेतमा फेला परेको ३ सय थान जति लाइसेन्सहरु संकलन गरेर उनीहरूले यातायात कार्यालयलाई बुझाएका छन् । यातायात कार्यालयमा राखिएको लाइसेन्स धान खेतमा फेला परेपछि कार्यालयको सुरक्षामाथि प्रश्न खडा भएकाे छ ।
कसैले गलत नियत राखेर लाइसेन्स फालेको हुन सक्ने बताउँदै यातायात कार्यालयले जनाएको छ । तेसो त यातायात कार्यालय जनकपुरधाममा दलाल र बिचौलियाको सहज पहुँच छ ।